Atletisma - Nahemotra ny fifaninanampirenena eny ambony kianja • AoRaha
Atletisma – Nahemotra ny fifaninanampirenena eny ambony kianja
Tapa-kevitra ny hampihemotra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja atletisma tanterahina anaty kianja ny Federasiona malagasy, nony farany. “ Niandry izay mety ho fivoaran’ny toe-draharaha izahay saingy tsy ho tratra ny fiandohan’ny volana jolay no heverina hanaovana an’ireo fifaninanam-pirenena ireo”, hoy Andriamahazo Norolalao filohan’ny Federasiona malagasin’ny atletisma.
Tokony hotanterahina amin’ny 1 – 3 jolay ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakam-pirenena ho an’ny sokajy minimes sy juniors, raha tokony ho amin’ny 10 – 12 jolay kosa ny an’ny cadets sy ny seniors. “Tapa-kevitra izahay ny hampihemotra izany saingy mbola tsy nofaritana kosa ny daty hanaovana izany noho ny toe-draharaha misy ankehitriny”, hoy hatrany ny filohan’ny Federasiona malagasin’ny atletisma.
Mila fotoana malalaka hanomanana izany rahateo ireo atleta ary tokony hialoha ny fifaninanam-pirenena ny fiadiana ny ho tompondakamparitra. Tombanana ho any amin’ny telovolana farany amin’ity taona ity no hanaovana izany. Hetsika akaiky indrindra eto an-toerana ny “Marathon international de Tana”, izay kasaina hatao amin’ny volana oktobra ho avy izao, raha tsy misy ny fiovana noho ny fiantraikan’ny valanaretina coronavirus.
Ankoatra izay, dia mety tsy hisy ny fivoahan’ireo atleta any ivelan’i Madagasikara, handranto fifaninanana amin’ity taona ity. Mety amin’ny taona ho avy indray vao handray anjara amin’ireo fifaninanana sy hetsika iraisam-pirenena ireo atleta malagasy.
Fanararaotana tsingerin-taona Voatilin’ny mpitandro filaminana ireo mpikotrika korontana
Fifaninanana tarehy amam-bika Tovovavy malagasy voahosotra ho « Miss » tany Maraoka
Fitsaboana ny covid-19 Fiainana vehivavy mpitsabo iray nandritra ny efa-bolana
Fiparitahana valanaretina :: Any Toamasina ny antsasa-manilan’ ireo nifindran’ny « Covid-19 »
Fandravana tsena tetsy Soarano :: Hampiakatra ny raharaha eny amin’ ny Fitsarana ireo mpivarotra